गर्मीमा ‘लु’ बाट कसरी जोगिने ? – हाम्रो देश
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्मी बढेपछि सचेत हुन आग्रह गरेको छ । गर्मी मौसममा तातो हावा ‘लु’ ले स्वास्थ्यमा जोखिम पुर्याउन सक्ने भएकाले सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । यो मौसममा चल्ने तातो हावाले धेरैलाई सताउँछ । पश्चिम तराईका विभिन्न ठाउँमा चर्को घाम र तातो हावा हुँदा धेरै जना बिरामी हुनुका साथै ज्यान समेत जान सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
हिमाल अनि लेकमा अक्सिजनको कमी भएमा लेक लाग्छ भने अत्यधिक गर्मीले ‘लु’ लाग्ने गर्छ । तराई क्षेत्रमा गर्मी बढ्दै गएकाले ‘लु’ वा हिट स्ट्रोकको समयमा उपचार नभएको खण्डमा ज्यान जान सक्ने खतरा भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको हो । गर्मीले नुन र पानीको कमी भएमा ‘लु’ लाग्न सक्छ । शरीरले ३७ डिग्री सेल्सियस अर्थात् ९८.६ डिग्री फरेनहाइट भएमा राम्ररी काम गर्छ ।